Shirka hoggaamiyaasha maamul-gobolleedyada oo maanta ka furmay magaalada Dhuusamareeb – Kalfadhi
Madaxweynaha maamulka Galmudug Maxamed Cabdi Kaariye Qoor-Qoor ayaa daah-furay shirka wada-tashiga Dowladaha Xubnaha ka ah Dowladda Federaalka, kaas oo maanta oo Sabti ah ka furmay xarunta Madaxtooyada Galmudug ee Magaalada Dhuusamareeb.
Shirkan waxaa ka qeyb-galaya Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni, Madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam, Madaxweynaha Koonfur Galbeed C/casiis Xasan Laftagareen iyo Madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare.
Madashan waxaa goob-joog ka ahaa xubno ka tirsan golayaasha Xukuumadda DXDF iyo xildhibaano heer fadaraal ah iyo bulshada rayidka.
Madaxweynaha maamulka Galmudug Maxamed Cabdi Kaariye Qoor-Qoor, ayaa sheegay in ujeedka shirka uu yahay sidii maamul-gobolleedyada dalka ay ka tashadaan hanaan doorasho, taas oo aan macnaheeda aheyn in tallada ay ku koobantahay madaxda maamul-gobolleedyada.
Madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare, ayaa sheegay in Xaliima Yarey iyo Guddiga Doorashooyinka ay yihiin farsano, isla markaanna dhibka laga daayo, tallada annaga ayaa ka shireyna.
Hoggaamiyaasha maamul-gobolleedyada, ayaa intooda badan khudbadahooda doorta ku saaray arrinta doorashada, waxaana shirka wajigiisa labaad la guda-galli doonaa maalinta berri.